Huawei Watch GT2 Pro: Ny famantaranandro feno indrindra hatreto | Vaovao momba ny gadget
Huawei Watch GT2 Pro: Ny famantaranandro feno indrindra hatramin'izao
Ny orinasa aziatika dia manohy mitazona ny kalandrie fampitaovana. Vao tsy ela akory izay, ireo hetsika manokana nataon'i Huawei dia nahita vaovao toy ny Huawei Watch Fit sy ny FreeBuds Pro vaovao miaraka amin'ny fanafoanana ny tabataba mavitrika avo lenta. Azonao atao ny mahita ny vaovao rehetra notsapainay tamin'ny Androidsis.
Mandritra izany fotoana izany dia efa mitsapa ny sasany amin'ireto vokatra natombok'i Huawei ireto izahay nandritra ny herinandro maro. Eo am-pelatanantsika ny Huawei Watch GT2 Pro vaovao, ny famantaranandro feno indrindra hatramin'izao. Jereo miaraka aminay ny fahaizany rehetra amin'ity fanadihadiana lalindalina ity.
1 Volavola: Miloka amin'ny ambaratonga premium
2 Toetran'ny teknika
3 Sensors tsy manam-petra sy fahaiza-manao fanofanana
4 Fahaleovan-tena sy ny traikefan'ny mpampiasa
5 Ny fehin-kevitry ny editor
Volavola: Miloka amin'ny ambaratonga premium
Manomboka amin'ny famolavolana isika, aiza Tian'i Huawei ny fitazonana ny endrika avo lenta ary hanangana ambonin'izany rehetra izany. Mbola mitohy ny filokana amin'ny boribory boribory amin'ny fomba famantaranandro nentim-paharazana madio indrindra, fa amin'ity tranga ity dia ny fitaovana no tena tsy ampoizina.
Manana tranga vita amin'ny titanium isika raha vita amin'ny kristaly safira ny ampahany voalohany, izay miantoka ny fanoherana bebe kokoa ny fiantraikany, na dia mirona hanao zavatra hafa amin'ny ankapobeny aza izy. Azontsika atao ny mamaha azy mora foana amin'ny sarimihetsika miaro izay matetika hitantsika.
Size: 46,7 mm x 46,7 mm x 11,4 mm
lanja: Gramin'ny 52
Ny famantaranandro dia lehibe, milanja 52 grama tsy misy tadiny, noho izany dia tsara ny fahatsapana voalohany. Amidy amin'ny fehin-kibo roa izy io, ny iray amin'ireo fluoroelastomer tena mahatohitra sy mahafinaritra amin'ny fikasihana (ilay efa nanandramantsika) ary iray hafa vita tamin'ny hoditra. Ny lanjanay vao nomenay dia tsy misy ilay fehy.
Ceramic ny valiny any aoriana ka manana andiany somary feno isika. Bebe kokoa hanampiana ny endrika. Raha ny amin'ny unboxing, manana ny Qi wireless charge base isika, raha tsy manana adapter tambajotra USB.
Eo ambanin'ny hood, araka ny filazan'izy ireo, Huawei dia nisafidy ny hampiditra processeur ekena ao anatin'ny fianakaviany, ny Kirin A1 + STL49R, miaraka amin'ny tahiry anatiny 4GB, izany rehetra izany dia hanome anao andiana fahaiza-manao sy fahombiazana izay nohamarininay. Ny rafi-piasana dia mihetsika ary ny efijery dia mamaly haingana ny torolàlana.
Ity fandidiana marina ity, mifanaraka amin'ny iOS9 + na Android 4.4+ Nahazo azy ny laza efa ananany, ary raha ny marina dia mendrika tokoa ny fampisehoana. Ny traikefa ara-teknikanay amin'ny ankapobeny dia tena tsara ary tsy afaka namily na inona na inona mihitsy aho tamin'ity lafiny ity.
Ny takelaka dia tontonana 454 x 454 AMOLED amin'ny famahana HD ary koa 1,39 santimetatra amin'ny totaliny. Io efijery io dia ahitsy tsara amin'ny loko, ny AMOLED dia manampy antsika amin'ny fanjifana batterie miaraka amin'ireo mainty madio (feno) ary ny famirapiratan'ny fanao dia ampy hahafinaritra amin'ny toe-javatra ratsy.
Ho an'ny ampahany dia manana fanoherana rano 5 ATM (50 metatra) isika, Bluetooth 5.1 ho an'ny fifandraisana manan-tsaina, miaraka amin'ny GPS mba hahafahany manao sarintany ny lalana ataontsika rehefa mankafy fivoriana fanazaran-tena lavitra ny trano isika. Ity GPS miaraka amin'ny kompà ity dia manome valiny tsara 100% ary tonga lafatra ho ahy izy io.
Sensors tsy manam-petra sy fahaiza-manao fanofanana
Manana karazana fampiofanana isan-karazany mihoatra ny 100 izahay. Notsapainay tamin'ny andrana izany tamin'ny maro tamin'izy ireo ary tamin'izy rehetra ireo dia naneho fahaiza-manao tanteraka izy io, betsaka ny ifandraisany amin'ny fiarahan'izy ireo singa toy ny GPS sy kompà hahazoana valiny tena azo antoka. Efa niresaka momba ny fampiharana Huawei Health tamin'ny fotoana maro izahay.
Ity fampiharana ity fahasalamana io no hamela antsika roa handamina ny famantaranandro (jereo ny horonantsary etsy ambony), mamela antsika hiditra sy hampidirina ihany koa ireo «tontolon'ny fiambenana» samihafa, endrika fanamboarana iray hafa izay tena tiako tokoa.
Ny tahan'ny fo
Ny iray amin'ireo sensor izay hanolorantsika fanamarihana manokana dia ny oxygen oxygen, zavatra izay nampidirin'i Apple tao anatin'ny Apple Watch Series 6 ihany koa ary nanapa-kevitra ny handroso i Huawei. Amin'ny fitsapana ataonay dia marina izany ary toa misy teboka tokony horaisina raha te hanatsara ny fiofanana izahay.
Fahaleovan-tena sy ny traikefan'ny mpampiasa
Tsy manana angon-drakitra feno momba ny «mAh» an'ny bateria izahay, Na izany aza, nahita fihenam-bidy miavaka izahay hatramin'ny 20 andro mihoatra ny fizakan-tena tamin'ny fizarana teo aloha ka hatramin'ny 15 andro izay nampanantenain'ity Watch GT2 Pro ity. .
Nahatratra 13 andro ny fizakantenan-tena mora foana isika niaraka tamin'ny fotoam-pampiofanana saika isan'andro, nanararaotra ny fahaizan'ny GPS, ny tahan'ny fo sy ny fo ary amin'ny tranga sasany dia ny sensor oxygen oxygen. Toa eo amin'ny ambaratongan'ny fahaleovan-tena (miaraka amin'ny efijery mandrakariva amin'ny tranga sasany) dia mbola i Huawei no mpitarika.
Ho azy, ny zavatra niainako dia tsara kokoa. Nampiasako ilay fitaovana tamin'ny Huawei P40 Pro izay haingana sy tanteraka ny fampifanarahana. Afaka niditra tamin'ny data tsy misy farany amin'ny rindranasa Fahasalamana izahay, ary koa nanararaotra nifandimby teo amin'ny sehatra samihafa.
Tsy te halahelo ny zava-misy fa misy mpandahateny ao aminy (matanjaka be) ary afaka mitantana ny mozika rehetra izahay (na ny fampidirana azy amin'ny famataranana na ny fitetezana ny fitaovana) mba hihainoana mozika ary handany andro lava be nefa tsy handray ny finday hampiofaninay, satria izy ireo dia ampifanarahana tsy misy olana.
Ny fehin-kevitry ny editor
Tiako ny zavatra maro momba ny Watch GT2 Pro, Ny voalohany dia ny famolavolana sy ny fitaovana dia vokatra Premium izay afaka miaraka aminao amin'ny fiofanana sy amin'ny hetsika iray somary miavaka kokoa, ny fanovana ny sehatra fotsiny dia ampy. Tiako ihany koa ny zava-misy fa tsy azo atao mihitsy ny manohitra azy rehefa miofana, vonona ho amin'ny zavatra rehetra izy.
Amin'ny lafiny iray, ny fizakantena, na dia nihena aza, dia mbola avo be, indrindra raha ampitahaintsika amin'ny fifaninanana. Azonao atao ny mividy azy amin'ny faran'ny volana septambra rehefa hamidy azy io amin'ny fomba ofisialy any Espana i Huawei. eo anelanelan'ny 329 sy 349 euro arakaraka ny toerana amidy.
Jereo ny pro GT2
Famolavolana sy famoretana avo lenta
Fahaizana teknika tsy manam-paharoa, tsy azo atao fanamby
Vidiny namboarina raha mandinika ny fifaninanana isika
Afaka nanolotra safidy hafa kely kokoa izy ireo
Tsy maninona ny manampy adapter tambajotra
Fifandraisana kely amin'ny fampandrenesana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » hevitra » Huawei Watch GT2 Pro: Ny famantaranandro feno indrindra hatramin'izao
Virgilio dia hoy izy:
Tsy afaka mandoa vola miaraka amin'ny famataran'ora ianao ary izany dia manao dingana lehibe eo ambanin'ny famantaranandron'ilay orinasa mino azy ho andriamanitra. Ary manana safidy mitovy amin'ny IOS toy ny amin'ny android, fa tsy ny zanatany, raha tsy izay ataonao amin'ny android dia ataovy amin'ny IOS. Ary ny famantaranandro hafa dia ho tantara
Mamaly an'i virgilio
Izahay dia mamakafaka ny vaovao avy any UGREEN amin'ny famahana ny bateria
Fa maninona i Epublibre no tsy mandeha? Zahao ireo safidy hafa ireo